Arabia Saodita: Vehivavy Eo Aorian’ny Familiana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 25 Jona 2011 10:52 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Español, عربي, Nederlands, বাংলা, русский, Ελληνικά, polski, Português, English
Laila Sindi, avy any Jeddah, dia mizara ny niainany tanaty andianà bitsika[ar].
Hoy izy manomboka miteny:
Eny, fitaka fotsiny ihany ny filazana sy toerana. Tsy niainga tamin'ny 5ora izany izahay ary tsy tany amin'ny faritry Awali izany.
Ho solon'izay, tamin'ny 9 ora maraina ry zareo no niala :
Niainga tamin'ny 9ora izahay ary nanomboka nitondra ny fiara teo amin'ny manodidina an'i Nuzha ka ny tanjona dia ny handeha hatrany amin'ny làlana faha 60 ary avy eo mahazo ny làla-mihodina mankany amin'ny manodidina an'i Khalidia alohan'ny hiverenana.
Niaraka tamin'ireo anadahiny sy namana iray, Laila no namily . Izy rehetra dia samy nanao saron-doha (Hijab) nefa nampiseho endrika.
Ny làlana nalalaka, nefa tsy foana:
Niainga tamin'ny 9ora tsy diso ary nitodi-doha moramora niazo ny lalana Nuhza..nalalaka tanteraka ny làlana nefa tsy foana fa nisy olona vitsivitsy nahita anay.
Fintinin'i Laila toy izao ny fihetsik'ireo mpandalo:
Ny olona sasany nanofahofa tànana ho fampaherezana raha ny sasany kosa nanao fihetsika hampijanona anay … nefa tsy nisy natahorana tany.
Folo minitra namiliana, nitranga ny tsy nampoizina:
Folo minitra taty aoriana, nahavita ny làlana faha 60 izahay ary nanomboka nahazo ny fiantombohan'ny làla-mihodina. Tratry ny fisavana izahay teo na dia efa imbetsaka nanao fanamarinana fa hoe tsy tokony hisy fisavàna eo amin'io toerana io.
Teo amin'ny toerana fisavana, niagavy azy ireo mba hanajanona ny fiara sy hivoaka tao ny manamboninahitra sy miaramila iray. Manazava i Laila :
Nivoaka izahay ary nasain'ilay manamboninahitra hiditra tao anaty fiarany, izay Ford. Nipetraka tao aoriana izahay rehetra. Tsy niteny na inona na inona izy fa nisintona ny kitaponay.
Niangavy anay ho tony izy taorian'ny nanombohanay nandresy lahatra sy nifanakalo hevitra ny amin'ny anton'ny nisintonany ny kitapo tety aminay kanefa nanindry mafy izy fa hamerina azy ireny ary nanome toky tsara anay
Tsy niresaka taminay mihitsy izy teo ampihaingàna ary nanajanona ny fiara teo amin'ny sisin'ny fihodinan-dàlana noho ny afaka 20 minitra sady nivoaka ny fiara ka nohidiny tao izahay. Nanomboka niahihahy izahay teo.
Nony tao ivelany, ilay miaramila dia niresaka tamin'ny finday
Nidina ny fiara izy ary niresaka tamin'ny findainy, niverina izy avy eo, naka ny entanay ary nanomboka nisava izany tao ivelan'ny fiara. Nihaiky aho fa niatsoantso sy nanompa ary nihantatra nitomany koa ny namako.
15 minitra teo noho eo no lasa, niverina tao anaty fiara ilay miaramila, nitondra an-tànana ny entan'ireo tovovavy, kanefa nalainy ny findainy mba tsy ahafahan'izy ireo miantso ny havany sy handraketany zavatra hafa.
Manazava i Laila fa:
Nampihorohoroako izy fa ho halaiko baraka ary ho toriko any amin'ny fitsarana. Nolazain'i Sana rahavaviko fa mpisolovava ny rainy ka hametraka fitoriana fiampangana azy kanefa tsy namaly izy. Nentiny tany amin'ny làlana Abidiya ny fiara ka vao maika niahihahy mafy izahay.
Ary mbola notohizany:
Teo am-pamiliana ny fiara dia nilaza taminay izy mba ho tony dia handeha ho azy ny raharaha. Eny, tsy nety nangina izahay na nijanona nihorohoro. Najanony tampoka ny fiara ary niteny mafy anay fa:”miniana amin'Andriamanitra aho fa eo anilanareo.”
Ary manampy izy hoe
Nilaza taminay izy fa nisy olona nahita anay ary nitaraina noho ny aminay tany amin'ny polisy. Rehefa azon'izy ireo ny filazana, nifanaiky izy sy ilay miaramila hafa handefa azy ireo mangingina.
Mibitsika i Laila fa hoe niteny ilay miaramila hoe teo mba hanampy azy ireo ry zareo.
Nilaza taminay izy fa avy any Lameka ka raha misambotra anay izy, dia hisy loza hanjo anay, ka naleony nanampy anay. Tsy natoky azy anefa aho mazava loatra ka nisisika niantso ny raiko.
Marihany koa :
Nazavainy anay fa tapitra ny fetr'ora fiasàny ka noho izany dia tsy miasa izy sy ilay miaramila izao ka azo itokisana..nefa raha mbola miantso olona ihany izahay, dia ho tezitra izy.
Nilaza taminay izy fa eo an-tànanay ny safidy..naveriny tao anatin'ny fiara izahay ka handray ny andraikitray noho ny fitarainana sy fikarohana, na miandry ao anaty fiara mandritra ny adiny ora mandrapandefany anay mody.
Milaza i Laila fa nisafidy ny hino azy ry zareo ka nalefa nody tany an-tranony avy.
Nipetraka tao aorinan'ny fiara ireo tovovavy nandritra ny adin'ny roa. Manoratra iLaila :
Nahatsiro-tena ho irery izahay tao anatin'ny fiarany nandritra ny adin'ny roa mahery, tsy nanao na inona na inona izy na dia ny niteny taminay aza. Nila fanafody ny anadahiko nefa tsy navelany niala ny fiara hitady izany izahay.
Midika izany fa niaro anay amin'ny famonjàna izy ary koa tsy hampidi-doza na hanahirana azy, izay takatray tsara .
Afaka adin'ny iray, ilay miaramila niteny taminy fa tiany raha tafaverina mody any an-trano ry zareo mandritra ny fotoam-bavaka mitatao vovonana, rehefa nalalaka ny làlana. Manazava izy:
Maherin'ny adin'ny roa no nipetrahanay tao anatin'ny fiarany ary taorinan'ny fanombohan'ny fivavahana, nentiny ny fiara ka nankany amin'ny tranon'i dadatoanay, ary ilay miaramila nanaraka nitondra ny fiaranay avy ao aoriana.
Niova lasa tsara fanahy ilay manamboninahitra.
Nangatahako ny nomeraon'ny findainy mba hahafahan'ny fianakaviako misaotra azy nefa tsy nekeny. Nilaza izy fa tsy nahita ary tsy mahafantatra anay ary izahay koa tsy nahita sy tsy mahafantatra azy.
Nefa na izany aza dia nitazona ny findain-dry zareo ilay manamboninahitra :
Tonga tany amin'ny tranon'i dadatoako izahay dia nivoaka ny fiara sy nisaotra azy ary dia lasa nandeha izy sy ilay miaramila. Nentiny ny findainay ary niala tsiny sy niangavy anay mba hanadino ny momba azy ireo.
Izay no famitinana ny zava-niseho ka miala tsiny noho ny fahalavan'ny bitsiko. Tsapako tena mbola mangorintsin'ny ahiahy sy horohoro ny tenako.
Lahatsary maro no nalefa tany amin'ny YouTube, mampiseho ireo vehivavy mitondra ny fiarany ao amin'ny Fanjakana. Vinavinaina ho teo anelanelan'ny 20 ka hatramin'ny 50 ny vehivavy nanohitra ny fandraràna ny fahazoana mitondra fiara ka nandray ny familiana. Norasin'ireo tambajotra sosialy ny vaovao, ka tamin'izany na dia ny tompom-bady aza dia nampiseho ny fahaizam-badiny mitondra fiara.
Aziza134 mizara ity lahatsary mampiseho vehivavy mitondra fiara ity:
Ao amin'ny Storify, PaulTOwen mizara ato ity fantina fanehoan-kevitra tao amin'ny Twitter momba ny vehivavy mandray ny familiana any Arabia Saodita ity.
Raha hijery fanehoan-kevitra maro ao amin'ny Twitter, araho ny tenifototra Women2Drive